Stockholm oo lagu Qabanayo Shir looga hadlay Xaalada Yemen
HomeWararka CaalamkaStockholm oo lagu Qabanayo Shir looga hadlay Xaalada Yemen
June 17, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Inta lagu guda jiro dhamaadka todobaadka ayaa lagu wadaa in magaalada Stockholm lagu qabto shir looga hadlayo xaalada Yemen.
Ku dhawaad ​​150 qof oo ka kala socda Yemen, UN, hay’ado caalami ah iyo wadamo kale ayaa kulmi doona si ay uga hadlaan xaalada amni ee dalka iyo horumarka siyaasadeed, sida uu qoray TT.
Hans Grundberg, oo hogaaminayay wada xaajoodyadii horseeday xabad joojinta Yemen ka socday tan iyo 2-dii April, ayaa ka mid noqon doona kuwa ka qeyb galaya wadahadalka, sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, xaaladda Yemen ayaa ah masiibadii bini’aadantinimo ee ugu xumayd caalamka. Dagaal ayaa halkaas ka socday tan iyo 2015-kii, in ka badan saddex milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay qaxaan tan iyo xilligaas.